Maamulka Galmudug oo dib u habeyn ku sameynaya wadooyinka Galkacyo – Radio Muqdisho
Maamulka Galmudug oo dib u habeyn ku sameynaya wadooyinka Galkacyo
Maamulka dowladda hoose ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug ayaa maanta ka bilaabay magaaladaasi howlo lagu bur burinayo dhismayaasha sharci darada ah ee laga dhistay wadada hareeraheeda iyadoo saaka la arkayay ciidamada amaanka maamulka Galmudug oo bur burinaya dhismayaashaasi.
Duqa Degmada Gaalkacyo ee maamulka Galmudug Bile Diini Cali ayaa sheegay in sababta ka dambeysa bur burinta dhismayaashan ay tahay kadib markii dayactir xoog leh lagu sameeyay wadooyinka magaaladaasi kuwaasoo qaarkood la saaray laami soona celiyay bilicda wadooyinka magaalada Gaalkacyo ee xarunta maamulka Galmudug.
Sidoo kale duqa degmada Gaalkacyo ayaa sheegay in Togga loogu talo galay inay biyuhu maraan guryaha uu ku yimaado dhamaantood la bur burin doono maadaama dib u habeyn lagu sameeyay wadooyinka magaalada Gaalkacyo.
Shacabka kunool magaalada Gaalkacyo ayaa si weyn usoo dhaweeyay howlahan lagu furayo wadooyinka iyagoo xusay inay horay ugu dhib qabeen wadooyinka oo ay biyo fadhiisan jireen taasoo ay ka imaan jirtay caafimaad daro baahsan.
Ol olaha la dagaalanka cunista qaadka oo ka socda Gaalkacyo